Imizwelo kubonakale kithi uhlobo umbala emizweni, okuyinto ephawula ubuhlobo bethu imfanelo ethile into, ngamanye amagama - kuba izinkanuko ithoni emizweni. Psychology definiruet imizwa njengoba izinqubo sengqondo ezenzeka ngendlela nakho futhi babonakalise ukuhlolwa siqu futhi ukubaluleka izimo zangaphakathi nezangaphandle ukuphila komuntu. Ngakho-ke, isici esiyinhloko kuba imizwa yabo subjective.
Ukwahlukaniswa kuhlanganisa imizwelo langempela imizwa, ukuma kwenhliziyo kanye nomthelela, imizwa, ukucindezeleka ngokomzwelo. Zonke izifundazwe ngokomzwelo kuthinte impendulo kokuziphatha yomuntu.
Izinhlobo imizwa kanye nezici zabo jikelele
Uhlobo onamandla kunayo abasabela ngayo ngokomzwelo kuyinto nomthelela. Ithinta emelelwa okukhulu, esifushane futhi ngokushesha egeleza ukuklabalasa okungokomzwelo, isibonelo, intukuthelo, usizi enkulu, intukuthelo, ukuphelelwa ithemba, ethukile. Isici nobuntu lolu hlobo kuyinto bamba egcwele psyche womuntu futhi ekhuthaza abantu ukuba noma yisiphi isenzo, it kuyindlela yemvelo yokusabela lapho ngokomzimba ukuze umfutho. Isimo affective ukushintsha kwezinhliziyo izinqubo engqondo. ukucabanga okunengqondo, ukunakekela kanye rationality usuthathelwa ukuziphatha okuyingozi.
Iqembu esilandelayo Ukwahlukaniswa imizwa uqokomisa imizwa yangempela. Ngokuphambene izinkanuko, banalo isikhathi eside, ngaphezu, bangase uxhumeke, okungukuthi, kuyindlela yemvelo yokusabela lapho hhayi kuphela umfutho ngokushesha, kodwa futhi phezu kungenzeka noma uyakhumbula.
Imizwelo ungaboniswa hhayi kuphela kahle noma kabi. Kumuntu uthi esingokwemvelo ezifana ukucindezeleka, ukukhululeka ukuqhanyelwa, ukupholisa.
Ikhumbula umthelela imizwa imisebenzi womuntu, imizwa ngezigaba ihlukanisa sthenic ezishukumisa ingqondo yomuntu ukuthi ukwandisa amandla mayelana nale ndaba, futhi asthenia, okubangela isimo yokwenziwa, ukusabela ngokomzwelo.
Imizwelo main noma eziyisisekelo yilezi:
- injabulo, ukuthi yisimo esihle kubangelwa nokwaneliseka.
- ihlazo - isimo esingokomzwelo, ogxile lokungafani ngamabomu imicabango yabo nezenzo, imithetho kuphela zizwakale kahle, kodwa futhi nezinkolelo zabo siqu.
- ukuhlupheka - isimo kubangelwa ukungakwazi ukuba anakekele izidingo zawo.
- yokwesaba - kuba umuzwa engakhi ehambisana ukuqaphela ingozi engaba khona noma okwenzekile.
- intukuthelo - isimo negative, okuvela kusenjalo kukhona isithiyo ekufezeni.
- nokwedelelwa - isimo negative okungokomzwelo okuhlobene ne ukungafani izimiso nemibono yezihloko ezimbili.
- nokucasula - isimo psyche womuntu uphawu lokususa, kubangelwa izinto ezihlukahlukene, ukuxhumana ngalo ngokucijile okuphikisana kuncike zokuziphatha.
I izici eziyinhloko imizwelo ziyabonisa futhi ubuntu babo eyabonisa, kanye nobuhlobo obuseduze izinqubo yezinto eziphilayo.
Amaqembu elandelayo zinhlobo - uzizwa. Ngokungafani imizwa, imizwa abe ngokucacile mkhulu futhi umnqopho, kanye walandisa sphere yezenhlalakahle zokuphila tesifundvo. Ngaphezu kwalokho, imizwa kukhona ukusabela okuhlala isikhathi eside ngokomzwelo.
Imizwa ezifanele noma zokuziphatha (zenzeka lapho eqhathanisa ngokoqobo kanye nemithetho yomphakathi), i-yesimilo netembusave (ubuhlobo bomuntu isimo kanye nezikhungo zayo), bokusungula (zingaveli inqubo yomsebenzi engqondweni yethu tesifundvo), tebuciko (ubuhlobo indoda enhle).
Elinye iqembu ngezigaba ehlukile ukusabela ngokomzwelo uqokomisa isimo - isimo isikhathi eside kakhulu ngokomzwelo ephawula indlela abantu abaziphatha ngayo ngokuvamile. Isimo ehambisana nempilo ngokomzimba futhi ukuzethemba yomuntu, kuba nokuhlolwa equlekile engokoqobo, libhekene obuhlukahlukene isikhathi lapho kuxhomeke ezicini eziningana, zangaphakathi nezangaphandle.
Ukuguquguquka kuthinta nekusebenta umsebenzi womuntu.
ngezigaba Ibe imizwelo noma isimo esingokomzwelo is generalized. Imizamo eyenziwe yizazi, kuhlanganise Wundt, ekwabiweni izimpawu ezivamile zonke imizwelo wabonisa ukuthi lonke uhlelo kunjani Ubukhulu ezintathu, ngamunye ephethe polar izinkomba ezimbili alizimele.
Self-ungubani futhi izingxenye zalo
Nokwelapha okusebenzayo ahillobursita. Retrocalcaneobursitis: Izimpawu, Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa